Tiorkia · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Tiorkia · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Tiorkia tamin'ny Jolay, 2018
Bahrain31 Jolay 2018
Ny toetry ny fikatrohana Kiorda
Iràka20 Jolay 2018
Sarotra hazavaina ny fihemoran'ny feo Kiorda, saingy mety noho ny tranonkala Kiorda eo ambany fanafihan'ireo mpijirika isan-karazany no antony ampahany lehibe amin'ny fihenan'ny fibilaogina.
Netizen Report: Mitohy ny fitondran'i Erdogan dia mbola ho voahenjika izany ireo mpanao gazety — mpandika teny ve no manaraka?
Fahalalahàna miteny19 Jolay 2018
Atolotry ny Advox Netizen Report ny tatitry ny fanamby, fandresena, fironana misongadina momba ny zo an'aterineto manerana izao tontolo izao.
Fijoroana Kiorda: vaovao isan-karazany
Iràka19 Jolay 2018
Manohy mitantara ny zava-niainany tamin'ny fampianarana tao Avaratr'i Iraka/Atsimon'i Kurdistan i Talk about the Passion. Miteny mafy i Thunder ao amin'ny toerana onenany ankehitriny ary misy voalavo ao aminy, saingy toa mankafy ny fitoerany izy ary hankalaza ny herintaona nampianarany tao Kiordistana.
Mitendry i Torkia….ny fifaninanan-kira Eurovision
Fampandrosoana10 Jolay 2018
Na dia mbola misy aza ny hetsi-panoherana ny filoham-pirenena manerana an'i Torkia, dia nieritreritra aho fa amin'ny lahatsoratra amin'ity herinandro, mety tsy hitovy hevitra amin'ny vinavina somary lehibe kokoa sy mampiala voly eo amin'ny kolontsaina Tiorka isika .... ny Fifaninanan-kira Eurovision!
Miditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny lehilahy mahery i Torkia
Fanampenam-bava03 Jolay 2018
Amin'ny fitsapana farany amin'ny fahaizany mitarika, avy nanaporofo indray ny antony mahatonga azy ho mpanao politika manana ny heriny indrindra ao Torkia sy mpitarika manana vahana indrindra eo amin'ny fitantanana hatramin'ny andron'i Mustafa Kemal Attaturk ny filoha Recep Tayyip Erdogan. Tsotra fotsiny: efa nivonona hanao izay rehetra tokony atao izy.